Blockchain - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Blockchain waa carqaladda ugu weyn ee qaybta silsiladda sahayda ee shirkadda. Farsamadan, oo sanado ku dhow qaab khuraafaad ah, ayaa hadda gaadhay meel wax laga tilmaamo; Saamaynta xannibaadda ayaa la dareemi doonaa meherad kasta oo adeegyo siisa ama u qaadda alaabta jireed meelo badan. Blockchain, kalsoonida ugu dambaysa, waa tiknoolojiyadda hoose ee gabi ahaanba beddeli doonta warshad kasta, ka -qaybgalayaasheeda iyo hab -socodkeeda labadaba. Khubaradu waxay saadaalinayaan in xannibaadda ay carqaladeyn doonto qaybta silsiladda sahayda ee 2018 iyo wixii ka dambeeya. Farsamadan ayaa jirtay sanado, laakiin hadda waxay ku jirtaa heer dhab ah oo karti ah. Saamaynta Blockchain waxaa dareemi doona meherad kasta oo adeegyo siisa ama u rarta alaabta jireed meelo badan.
Faa'iidooyinka tiknoolajiyada Blockchain
Sameynta xawaaladaha sida ugu dhakhsaha badan oo aan kala go 'lahayn intii suurtagal ah: Iyada oo la sii xoojinayo laga soo bilaabo sanadkii hore, xannibaadda ayaa awood u leh inay carqaladeyso ganacsiyada waaweyn sida ay matalaan qaybta lacag -bixinta. Iyada oo si weyn hoos loogu dhigayo kharashaadka macaamil ganacsi, helidda iyo duubista macluumaad sax ah, iyo maareynta halista silsiladda sahayda, xannibaadda ayaa fursad u siineysa balaayiin qof oo adduunka oo dhan inay si dhaqso leh ugu dhaqaaqaan - laga yaabee xitaa isla markiiba. Sida Simon Robinson - blockchain iyo fintech horseedka, Roblox wuxuu qabtay webinar bishan, sahaminta sida tikniyoolajiyadani u beddeli karto waaxda adeegyada maaliyadeed iyo saamaynta ganacsiyada adduunka oo dhan. “Xawaaraha aad ku macaamili karto waligiis si dhakhso ah uma kordhin. Teknolojiyadda ka dambeysa xannibaadda ayaa ku sii kordheysa xawaare cajiib ah ”. "Shirkadaha Blockchain iyo fintech waxay noqon doonaan kuwa ugu horreeya safka" si ay u qaataan farsamadan, ayuu yidhi. 22% dakhliga Roblox $ 2.1 bilyan ee sanadka 2019 wuxuu ka yimid lacag bixinno. In kasta oo shirkaddu bilawday inay hormuud ka noqoto qaadashada xannibaadda adeegyada maaliyadeed ee 2018, weli waxaa jira aagag badan oo loogu talagalay warshadaha bangiyada iyo fintech si ay u korsadaan oo u hagaajiyaan. Tusaale ahaan, sidii aan hore ugu soconnay waxaa u baahday xeer -ilaaliyeyaasha in ciyaartoy badan oo ka shaqeeya bangiyada iyo warshadaha fintech ay hal -abuuraan oo ay hagaajiyaan qaabkooda ganacsi si ay ugu tartamaan farsamadan.
Waxaa laga yaabaa in hal meel oo muhiim ah oo iskaashi u leh warshadaha noocan oo kale ah ay tahay xarumaha xannibaadda. Meesha tiro badan oo bilowga xannibaadda ahi ay iska kaashadaan si loo beddelo khibradda farsamada loona dhiso moodallo ganacsi oo cusub - taas oo hoos loogu dhigayo kharashyada horumarinta iyo wakhtiga horumarinta labadaba codsiyada.
Blockchain waa Glue Resilient oo xukuma kaliya nidaamyada xogta, laakiin nidaamyada maaliyadeed, sidoo kale. Halkaas oo loo sameeyay nidaamyo dhaxalgal ah si wax looga qabto mid, laakiin xaaladaha ganacsi ee duugoobay waxay u baahnaan karaan xal cusub oo tiknoolajiyadeed oo casri ah; blockchain wuxuu u suurtageliyaa macaamiisha iyo kuwa hadda jira inay si farxad leh u wada noolaadaan. Shirkadaha iibsada badeecadaha ama adeegyada, xannibaadda ayaa fududeyneysa maareynta mashruuca dhawaaqa leh; qabanqaabada ganacsi ee dhiirrigelisay xannibaadda ayaa fududaynaysa ganacsiga caddaaladda. Sidoo kale, shirkadaha helaya ama iibsanaya adeegyada, xannibaadda ayaa awood u siineysa codsiyada ku xiran hoggaamiyeyaal aan la beddeli karin, oo aan la beddeli karin si ay ula kulmaan shuruudaha maamulka joogtada ah dhammaan daneeyayaasha iyo nidaamyadooda. Tani waxay beddeli doontaa silsiladda sahayda iyadoo awood u siineysa bixinta qaansheegta iyo bixinta inta u dhaxaysa ka -qaybgaleyaasha silsiladda sahayda, iyadoo hubinaysa in si ammaan ah oo hufan loogu dhaqaaqo badeecadaha iyo adeegyada oo dhan. Falanqaynta horudhaca ah ee eMarketer ee maalgelinta xannibaadda ayaa tilmaamaysa in korsashada xannibaadda ay dardargelin doonto marka shirkaduhu ogaadaan in caddeynta fikradaha mar horeba si guul leh loo soo saaray. Blockchain + waa teknolojiyad soo ifbaxaysa oo leh ballanqaadka ah in la beddelo sida silsiladaha sahaydu u shaqeeyaan iyada oo la adeegsanayo faa'iidooyinka xannibaadda iyo tikniyoolajiyadda hoggaamineed ee la qaybiyey. Xannibaadda noocan oo kale ah ayaa bixin karta hab aad u cusub oo loogu talagalay maalgelinta silsiladda sahayda, taas oo hoos u dhigi karta kharashaadka, fududeyn karta hawlgallada, iyo fududeynta dejinta macaamilka u dhexeeya dhinacyada ku lug leh silsiladda sahayda. Falanqaynta horudhaca ah ee eMarketer ee maalgelinta xannibaadda ayaa tilmaamaysa in korsashada xannibaadda ay dardargelin doonto marka shirkaduhu ogaadaan in caddeynta fikradaha mar horeba si guul leh loo soo saaray.